घर किन्दा गाडी उपहार, तपाई छुट्नु त भएन ? « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
घर किन्दा गाडी उपहार, तपाई छुट्नु त भएन ?
काठमाण्डौं । भृकुटीमण्डपमा जारी घरजग्गा मेला आज चैत २८ गते सकिँदैछ । घरजग्गा खरिद बिक्रीमा गिरावट आएपछि आयोजित यस मेलामा व्यवसायीहरुले घरजग्गा किन्नेलाई गाडी उपहार दिनेसम्मको आकर्षक योजना अघि सारेका छन् ।
मेलामा विभिन्न घरका डिजाइन, जग्गाको योजना तथा विकास, निर्माण सामाग्री, इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट, विद्युतीय सामाग्री लगायतको १ सय २० स्टलहरु रहेका छन्। मेलामा हालको घरजग्गाको मूल्य, निर्माणको सही तरिका, सही सामाग्रीको छनौट तथा मूल्य, ऋणका लागि बैंकिङ सेवा सुविधा लगायतका सम्वन्धमा निशुल्क परामर्श लिन पाइन्छ।
घरजग्गाको ऋण प्रबाहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ५० प्रतिशत कमी गरेसँग यसको खरिद बिक्री ह्वात्तै घटेको छ। यस्तो अवस्थामा घरजग्गा मेलामा व्यवसायीहरुले एउटा घर खरिद गरे गाडी उपहार दिनेसहितका विभिन्न आकर्षक उपहार योजना अघि सारेका हुन्। व्यवसायी रमेश थापाले एउटा घर खरिद गरे गाडी उपहार दिने योजना ल्याइएको बताए। उनले घर बनाउनेलाई निःशुल्क डिजाईनको व्यवस्था पनि गरिएको स्पष्ट पारे।
२८ चैत २०७३, ७।००